Video ayeey Talooyin - Talooyinka Samaynta Better Home Movie
> Resource > Video > Home Video ayeey Talooyin - Sida loo sameeyo a Great Home Movie
Dad badan ayaa kaamirada iyo wax badan oo ka mid ah filimada ugu ganaan oo aad rabto in nafo la filimada guriga xusuus xal waara. Haddii aad jeceshahay si ay u sameeyaan qaar ka mid ah filimada guriga in urursan karaan iyo jeclaa ee qoyska, isku day in aad raacdo talooyinka guriga video tafatirka hoos ku qoran.
Talooyin Home video tafatir wanaagsan guriga filim samaynta
1. sidoo Ogow fiidiyo
Hubi in aad tahay qof aad u aqoon u leh aad fiidiyo ka hor si aad toogasho karo videos wanaagsan iyo sawiro. Haddii aadan, akhri toogashada buugga iyo dhaqanka ka hor inta aadan u socdaan in ay toogtaan videos for aad movie guriga.
2. Samee qorshe movie guri
Maskaxda ku hay waxa movie guriga waxa uu noqon jeclaysto iyo bixiyo to content dareenka badan. Oo markay aad u qoraan videos ah, qaado qorshaha tixgelin. Marka aan sidaa yeelno, waxa aad sameyn kartaa in aad movie guriga more isku xidhan.
3. gan wanaagsan videos
Hubi in videos badan iftiinka iyo mugdiga ku jira aan. Kana Dhawrsada dhawaaqa asalka, oo isku day inaad xakamayso inta suurtogalka ah. Ka sokow, isku day in aad ka xaglo kala duwan toogan goobaha.
4. Ku dar saamaynta video tafatirka
Marka aad sixiddiisa filimada adiga oo isticmaalaya qaar ka mid ah software video tafatirka , aad jar karaa, kala, isku shaandheyn, kala videos ka hor ama ka dib iyadoo la isticmaalayo PIP ah, bood-jaray, Toos Off saamayn, laakiin ha isticmaalin saamayn aad u badan kala guurka.
5. sawiro iyo videos Isku wada
Si aad gurigaaga video badan oo horumarsan sameeyo, waxaad geli kartaa qaar ka mid ah sawirada weli si videos ama isticmaalaan qaar ka mid ah saamaynta video sare sida sawirka dhaqan sawir ku iMovie . Waxay hubaal ka dhigi doonaa inaad video aad u xiiso badan.
6. Ha ka Yeelina u video guriga aad u dheer
Videos guriga intooda badan waa dheer iyo caajis. Si kastaba ha ahaatee, dadka inta badan ma jecla in ay arkaan Qoomaan aad. Sidaas sameeyo gurigaaga video gaaban, macaan oo soo jiidasho leh. Hel goobaha ugu wanaagsan oo iska tuur kuwa wax yar awgood.
7. Qaado kaftan qaar ka mid ah
Successful commercials TV waa la kaftan fiican oo la sameeyo dadka ku faraxsan yahay. Ku darista kaftan qaar ka mid ah si ay u videos guriga aad ku soo celin doonaa heerka ku xiga isla. Waxaad ka heli kartaa qaar ka mid ah video funny online oo ka heli qaar ka mid ah inspirations iyaga ka on sida loo sameeyo video qosolka oo soo jiidasho leh.
Xusuusnow in videos guriga weyn waa in gaaban, qosol, dhagan oo si sahlan si uu u daawado. Halkan waxaa ku qoran talooyin tafatirka guriga video fudud oo keliya. Kuwa soo socda waa version tijaabo ah Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) (Windows iyo Mac version), kaas oo gaari karo oo dhan riyada ku saabsan software video tafatirka aad.
Video Editor Home: Sida loo Edit Home Video
Sida Loo Doorto Video Editor a Good aad u baahantahay
iVI ma shaqaynta? Xaliyay
Sida loo rogo ama URL in MP3
Sidee ku cadaadisaa Video for YouTube
Sida loo yareeyo awoodda AVI (Divx, Xvid) Video